माधव नेपालले गरे राजनीतिबाट सन्यास लिने घोषणा, के हो यथार्थ ? — Imandarmedia.com
माधव नेपालले गरे राजनीतिबाट सन्यास लिने घोषणा, के हो यथार्थ ?
काठमाडौ। नेकपा एमाले फुटाएर एकिकृत समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष बनेका माधवकुमार नेपालले आफूले छिट्टै राजनीतिबाट सन्यास लिने घोषणा गरेका छन् । पार्टी अध्यक्ष बनको भोलीपल्टै नेपालले राजनीतिबाट सन्यास लिने घोषणा गरेका हुन् ।
पार्टी दर्ता भएपछि पहिलोपटक सम्बोधन गर्दै उनले ओलीमाथि दुईपटक पार्टी फुटाउन भूमिका खेलेको आरोप समेत लगाए ।
‘केपी ओलीले पार्टी फुट्दा भोज गरेर खुशीयाली मनाए,’ माधव नेपालले भने । उनले ओलीले पार्टीलाई तहसनहस पारेको आरोप समेत लगाए ।
दुईपटक प्रतिनिधि सभा विघटन र पार्टी फुटाउने किर्तिमान कायम गरेको आरोप समेत ओलीमाथि लगाए । उनले ओलीलाई अहंकारको घोडामा सवार भने ।
नेपालले ओलीलाई प्रतिगमनकारी भने । ओलीले कम्युनिस्ट सिद्धान्त छाडिसकेको टिप्पणी समेत गरे । ओली दक्षिणपन्थी अवसरवादको भाँसमा फसेको उनको आरोप थियो ।
यसै गरि, भीम रावलले नयाँ पार्टी खोलेको रहस्य खुल्यो, बालकोटमा खैलावैला
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले नयाँ पार्टी खोलेको रहस्य खुलेको छ । एमालेभित्र क्रान्तिकारी नेताको छवि बनाएका रावलले एकीकृत समाजवादी जन्मिन भन्दा अगाडिनै पार्टी दर्ता भएको खुलेको हो ।
एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता गरिसके पछि अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले यस्तो रहस्य खोलेका हुन् । आफ्नो साथ् छाडेर ओली पक्षमा लागेका मध्यमार्गी नेताहरूले पहिले नै पार्टी दर्ता गरिसकेको रहस्य खोलेका हुन् ।
नेता नेपालले पार्टी दर्ता पछिको औपचारिक पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो रहस्य खोलेका हुन् । अध्यक्ष नेपालले यस्तो आरोप लगाएपछि भीम रावलले स्पष्टिकरण दिएका छन् ।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटी रावलले आफूहरुले पार्टी दर्ता नगरेको मौखिक स्पष्टिकरण दिएका हुन् । नेपालको सुरा सुनेर सशंकीत भएका ओलीले भीम रावलको कुरा सुनेपछि ढुक्क भएका छन् ।
नेता नेपालले पहिले नै पार्टी खोल्ने र अर्को पार्टी खोल्न उक्साउनेहरूले नै आफ्नो साथ छाडेर दक्षिणपन्थीलाई साथ् दिएको बताए । नेता नेपालले आफूलाई छाडेर जानेहरुले त्यसबेला नै नयाँ पार्टी दर्ता गराएको खुलासा गरेका छन् ।
उनले सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल लगायतका मध्यमार्गी भनिएका नेताहरूले पार्टी पहिले नै खोलिसकेको, आफूलाई पार्टी फुटाउन उक्साएको र बिचैमा छोडेको आरोप लगाए । विद्यार्थी नेता जीवन राईको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत नामको दल दर्ता गरेका थिए । उक्त दल दर्ताका लागि नेता सुरेन्द्र पाण्डेले जीवन राईलाई बारम्बार ताकेता गरेका थिए ।
एक नेताका अनुसार नेता पाण्डेले राईलाई ‘त्यति जाबो पार्टी खोल्न पनि म नै धाउनु पर्ने हो र भन्दै दवाव दिएका थिए । यसैलाई संकेत गर्दै पत्रकार सम्मेलनमा नेता नेपालले साथ् छाडेका नेताहरूले पानीले नै दल दर्ता गरिसकेको बताएका थिए । उनले अहिले विभिन्न कारणले उनीहरु आफूहरुसँग आउन नसकेको बताए । बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले बताएका हुन् ।
‘हाम्रो साथ छाडेका साथीहरुले नयाँ पार्टी दर्ता त्यसबेला नै गरिसकेका थिए ।’ उनको भनाइ थियो, ‘ओलीले पार्टीलाई निजी कम्पनीमा ढालेपछि, जनताका एजेन्डालाई तिलान्जली दिएपछि त्यसका विरुद्धमा विद्रोह गर्ने बाहेक विकल्प भएन ।’
‘इतिहासमा यस्तो धेरै भएको छ । समूहमा र पार्टीमा यस्ता विद्रोह भएका छन् ।’ उनले भने, ‘ठूलो पंक्तिले ओली समूहबाट विद्रोह गर्नुभएको छ । हामीले उतिबेलै पार्टी खोल्न सक्थ्यौँ । हामी जनताबाट निर्वाचित भएका कार्यकर्ताको सुरक्षाका बारेमा सोच्नुपर्ने हुन्थ्यो । संघीय संसदको हकमा सोच्नुपर्थ्यो ।
कति छ देशभर एमालेको सम्पति, माधव नेपालको भागमा कति ?
कपा एमाले विभाजन भएको छ । विभाजन पछि माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी (एस) दर्ता भएको छ ।नयाँ पार्टी दर्ता भएपछि नेकपा एमाले सम्पति के हुन्छ ? भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ । नेपालले आफ्नै नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेपछि एमाले पार्टीको सम्पत्तिमा दावि गर्न पाइन्छकी पाइदैन ? यस विषयमा पनि बहस सुरु भएको छ ।
निर्वाचन आयोगमा बुझाएको सम्पत्ति विवरणका आधारमा नेकपा एमाले मुलुककै सबैभन्दा धनी पार्टी हो। एमालेसँग जग्गा, भवन र नगदसहित एक अर्बभन्दा धेरै सम्पत्ति छ।नेपालले पार्टी विभाजन गरेपछि अब एमालेको सम्पत्ति पनि विभाजन हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। नेपाल पक्षले विभाजनपछि सम्पत्तिमा दाबी गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
बिहीबार एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेता नेपालले एमालेमा रहेको सम्पत्तिको विषयमा कानून अनुसार अगाडी बढ्ने जानकारी दिए । ‘कानुनमा के छ हेरौंला। दाबा गरौंला। होइन भने म निर्माण गर्न सक्छु,’ उनले भने, ‘म निर्माण गर्ने अरू ध्वंश गर्ने हुन्।’नेकपा एमालेको नाममा राजधानीको बल्खुमा १३ रोपनी जग्गा छ। त्यस्तै पुतली सडकमा मनमोहन मजदुर भवन र मजदुर संगठन जिफन्टको कार्यालय रहेको छ।
एमालेको ललितपुरमा तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान भवन र काठमाडौंको रानीबारीमा पुष्पलाल प्रतिष्ठानको भवन रहेको छ । भूकम्पपछि एमालेको बल्खुको भवन भत्किएपछि अहिले पार्टी कार्यालय थापाथलीको भाडाको घरबाट संचालन हुँदै आएको छ ।
पार्टीका बैठकहरू तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानको भवनमा हुने गरको छ। यसैबीच, निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले पार्टी विभाजनपछि आपसी सहमतिमै सम्पत्तिको बाँडफाँड हुँदै आएको बताएका छन्।